ဘရာဇီးအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(233 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ... ဘရာဇီးလောင်းကစားသမားတွေအတွက်လာနိုင်အောင်မလွယ်ကူပါဘူး။ 1946 တိုင်အောင်, တိုင်းပြည်အတွင်းလောင်းကစားအများစုပုံစံများကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ သို့သော်သူတစ်ဦးပိတ်ပင်မှုအကြောင်းမဲ့အားကစားလောင်းကစားအပါအဝင်အသစ်တခုသမ္မတ Dutra အပေါင်းတို့, အစဉ်အလာလောင်းကစားရုံများနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းဖျော်ဖြေရေး, ပါဝါဆီသို့ရောက် လာ. , တစ်ကြိမ်။ တစ်ခုခြွင်းချက်အဖြစ်သာမြင်းပြိုင်ပွဲနှင့်ထီအပေါ်လောင်းကစားခွင့်ပြုထားပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ. အနည်းငယ်သာပြောင်းလဲသွားပြီနှင့်ကန့်သတ်နေဆဲဂိမ်းကစားကန့်သတ်။
အဆိုပါ 1960s ခုနှစ်တွင်အစိုးရကအားလုံးတရားမဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံပိတ်ဖို့ရန်အောင်မြင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုယူနိုင်ခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, slot ကစက်တွေပေါ် 1990 ရဲ့တားမြစ်ချက်ကတည်းကဖယ်ရှားခဲ့ပြီးယနေ့ 100,000 ထက်ပိုဘင်ဂိုကစားထူထောင်မှုအနည်းငယ်ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းကက်တလောက်လောင်းကစားဝိုင်းမှတ်စုတွင်ဘင်ဂိုကစားဂိမ်းများကိုဘရာဇီးအတွက်ကိုလည်းဥပဒေကြောင်းအရဖြစ်ကြောင်း။ သို့သော်သူတို့ကယာယီ 2004 အတွက်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ကြသည်။ သောကြောင့်အစိုးရနှငျ့ပတျသကျသောလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၏ခေါင်းစဉ်အပေါ်အရှုပ်တော်ပုံ၏9လအတွင်းမှာဘင်ဂိုကစားပိတ်ပင်ခဲ့။
ထိပ်တန်း 10 ဘရာဇီးအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
(ဘရာဇီး, အားကစားအပေါ်နှင့်အွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစားပေါ်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားအတွက် 1946 ပုဂ္ဂိုလ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်များအွန်လိုင်းလောင်းကစားအတွက်တရားဆိုပါတယ်ကဲ့သို့), ဘရာဇီးအတွက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိသို့ရာတွင်ထိုကဲ့သို့သောဖျော်ဖြေရေးတားမြစ်သည်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဖို့တိကျတဲ့ရည်ညွှန်းဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း။ လောင်းကစားဘရာဇီးအွန်လိုင်းကစားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီသူတို့ကနိုင်ငံခြားအော်ပရေတာများ၏ဆိုဒ်များ၏အသုံးပြုမှုကိုမမြစ်တားကြ, ဘရာဇီးအတွက်ဥပဒေများကိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားအဖြစ်နိုင်ငံခြားတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုရမည်။
2012 ခုနှစ်, သိပ္ပံ, နည်းပညာ, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဆီးနိတ်လွှတ်တော်၏ဆက်သွယ်ရေးကော်မတီဒေသခံကစားသမားအင်တာနက်ပေါ်ရှိလောင်းကစားဝိုင်းန်ဆောင်မှုများခံစားရန်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်သည့်ဘရာဇီးအတွက်ဆိုဒ်များအွန်လိုင်းလောင်းကစားပေါ်မှာရှိသမျှခရက်ဒစ်ကဒ်အရောင်းအပိတ်ဆို့ဖို့အဆိုပြုချက်ကို, ရှေ့ဆက်ထားတော်မူ၏။ သို့သော်ဤပြဿနာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်တွင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ဘရာဇီးကစားသမားတောင်မှသူတို့ရဲ့စာမကျြနှာတစ်ပေါ်တူဂီဗားရှင်းရှိပါတယ်အချို့သောအရာ၏, နိုင်ငံခြားအော်ပရေတာများ၏ဆိုဒ်များတွင်အွန်လိုင်းအလောင်းအစားမှဆက်လက်။ ယနေ့အထိ, ဘရာဇီးအတွက်အွန်လိုင်းလောင်းကစားစျေးကွက် 265 သန်းဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
ဘရာဇီးကနေကစားသမားကိုလက်မခံကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ဒီနေရာတွင် slot ကစက်တွေကနေဂိမ်းတွေ NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, ပြိုင်ဘက်ဂိမ်း, နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောကျော်ကြား software ကိုရောင်းချသူထံမှအသက်ရှင်နေထိုင်လောင်းကစားရုံမှဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုလည်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ဆုကြေးငွေများနှင့်ဘရာဇီးကနေကစားသမားမှမရရှိနိုင်ပါငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာသတိထားဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နိုင်သည်။
ဘရာဇီးကနေကစားသမားလက်ခံအွန်လိုင်းဖဲချပ်က်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ကစားတဲ့, Blackjack, hold'em နှင့်အခြားကဒ်ဂိမ်း၏များစွာသောမူကွဲခံစားပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ဘရာဇီးကနေကစားသမားလက်ခံအွန်လိုင်းဖဲချပ်က်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်ပါ။
ဘရာဇီးကနေကစားသမားယူပြီး, အားကစားအပေါ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များများ၏စာရင်းကိုကြည့်ရှုပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ သင့်ရဲ့ကစားနည်း Place, ဘရာဇီးအတွက်အများအပြားတစ်ဒါဇင်အွန်လိုင်း Bookmakers ၏အဆိုပြုချက်အကြားသင့်ရဲ့ပွဲများ koeffitsinty များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ။ နှင့်သတင်းအချက်အလက်များပိုမိုအဘို့, ဘရာဇီးကနေကစားသမားယူပြီး, အားကစားအပေါ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်များကိုပြန်လည်ရည်ညွှန်းသည်။
0.1 ထိပ်တန်း 10 ဘရာဇီးအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း